Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Seychelles Madagascar Malgache » Seychelles dia mandray ny hazavana maintso izao avy any Italia
Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovaom-panjakana • Hospitality Industry • Vaovao farany Italia • Vaovao • fanorenana • Seychelles Madagascar Malgache • Tourism • Fitaterana • Fanavaozana ny tanjon'ny dia
Seychelles dia mandray ireo mpitsidika avy any Italia
Seychelles dia ho afaka hanasa ny mpitsidika avy any Italie "Benvenuto" indray rehefa manome ny jiro maitso mamela ny olom-pireneny hitety firenena enina ivelan'i Eropa.
Ny minisiteran'ny fahasalamana italiana dia manokatra lalantsara fitsangatsanganana tsy misy COVID fanandramana ho an'ireo "zotra fizahan-tany voafehy" ivelan'i Eropa.
Ity lalantsara ity dia manaisotra ny filan'ny quarantine ho fisorohana COVID-19 na amin'ny fahatongavana na amin'ny fiverenana avy any amin'ny toerana itodiana.
Mpizahatany 27,289 2019 mahery avy any Italia no nitsidika an'i Seychelles tamin'ny taona XNUMX, raha io no tsena loharano lehibe fahaefatra.
Ny nosy paradisa amin'ny Ranomasimbe Indianina any Seychelles dia iray amin'ireo toeran-kafa tsy eropeana azon'ny olom-pirenena itodiana italianina satria ny minisiteran'ny fahasalamana italiana dia manokatra lalantsara fitsangatsanganana COVID tsy andramana ho an'ireo "fizahan-tany fizahan-tany voafehy" ivelan'i Eropa tsy mila quarantine ho COVID -19 fitandremana na amin'ny fahatongavana na amin'ny fiverenana avy any amin'ny toerana itodiana.
Tamin'ny kabariny fanokafana tamin'ny fanambarana natao ho an'ny Antenimieram-pirenena hanamarihana ny Andro maneran-tany fizahan-tany ary ny Herinandron'ny fizahan-tany manerantany ny Alarobia 29 septambra, ny Minisitry ny Raharaham-bahiny sy ny fizahan-tany Sylvestre Radegonde, Seychelles dia niarahaba ilay fanambarana ho “Vaovao mahafaly, vaovao tena tsara tokoa.”
Raha nilaza ny maha-zava-dehibe an'io fivoarana vaovao io eo am-piomanana ny firenena handray ireo mpitsidika avy amin'ny tsena fizahan-tany fizahan-tany fahefatra ho any amin'ny nosy Indiana dia nilaza ny sekretera talen'ny fizahan-tany Sherin Francis fa faly tamin'ny vaovao izy, tamin'ny filazany hoe: manantena ny handray tsara ireo vahiny italianina mahafaly antsika izay malaza amin'ny hatsarany sy 'joie de vivre.'
“Ny Italiana dia nankafy foana ireo vokatra marobe Seychelles tsy maintsy atolotra, indrindra ireo trano fandraisam-bahiny antonony mifototra amin'ny Praslin. Mpitsangatsangana izy ireo ary mankafy mijery ireo nosy, mandeha fitsangatsanganana, mitsambikina amin'ny nosy, mitsangantsangana amin'ireo làlana, misakafo any ivelany ary mahita ny toerana halehany amin'ny ankapobeny. Betsaka ny fanananay no manana vahiny vahiny tsy mivadika aminy izay manantena ny handeha raha vao omena ny jiro maitso. Seychelles koa dia toerana notadiavin'ny mpikarakara mariazy fampakaram-bady. ”
Mpizahatany 27,289 2019 mahery avy any Italia no nitsidika an'i Seychelles tamin'ny taona 10, raha io no tsena loharanon-kevitra fahaefatra ho an'ny toerana misy azy, izay misy XNUMX% ny olona tonga avy any Eropa.
Hatramin'ny dingana farany amin'ny fanokafana ny sisin-taniny tamin'ny 25 martsa tamin'ity taona ity, sidina iraisam-pirenena tsy latsaky ny 32 ny herinandro, tsy manisa ny sidina ataon'ny kaompaniam-pirenena Air Seychelles sy ny serivisy atolotry ny kaompania eropeana Condor ary Air France.